डेनमार्क भेला काँग्रेसलाई बलियो बनाउनेमा केन्द्रित हुनेछ : विरेन्द्र सिंह कार्की – Nepal Japan
20 June, 2019 16:43 | अन्तरवार्ता | comments | 68400 Views
नेपाली कांग्रेसका विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुको तीनदिने प्रशिक्षण भेला डेनमार्कको कोपनहेगनमा शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ। कोपहेगनको भेस्टरपोर्टमा अवस्थित रिचमण्ड होटलमा तीनदिनसम्म चल्ने भेलामा विश्वभरबाट जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरुले भाग लिदैछन्।
पार्टीको केद्रीय नीति, अनुसन्धान, तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रमको संयोजन नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कले गरेको छ । डेनमार्क भेलालाई नै केन्द्रित गर्दै कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा काँग्रेस नेताहरुले छुट्टै छलफल गरेका खबरहरु पनि आए। देउवाईतरका नेताहरुले भेला बहिष्कार गर्ने चर्चा समेत भयो। आखिर के हुँदै छ डेनमार्क भेलामा ? कुन-कुन नेताहरु सहभागि बन्दैछन् ? डेनमार्क भेलाको खास उद्देश्य के- हो ? प्रस्तुत छ,यसैको सेरोफेरोमा नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका सभापति विरेन्द्र सिंह कार्कीसँग बसन्त रानाभाटले गरेको कुराकानी :-
काँग्रेसहरुको भेला डेनमार्कमा नै किन गर्नुभयो ?
नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कले २०१८ जनवरीमा एक बैठकबाट विश्वस्तर वा युरोपस्तरको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै पार्टीलाई पत्र पठायो। यसको तयारी र छलफलका लागि हामीले युरोपका बिभिन्न देशका जनसम्पर्क समितिहरुसँग छलफल र सहकार्य पनि गर्यौ। पार्टीमा दवाव सृजना गरेर जनसम्पर्क समितिहरुको भूमिकाबारे केन्द्रियतहमा अझ राम्रो जानकारी होस् भनेर नै कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो कार्यक्रम कुनै पक्ष वा विपक्षले दिएको वा कुनै पक्ष सहभागि बन्ने वा नबन्ने भन्दापनि समग्र नेपाली काँग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? प्रबासमा रहेका काँग्रेस कार्यकर्ताहरुका लागि छलफल र बहस गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो।
तर डेनमार्क भेला हुँदै हुँदा कतिपय जनसम्पर्क समितिहरु बञ्जित छन् नि ? कसैलाई सहभागी गराउने,कसैलाई रोक्ने किन ?
कतिपय जनसम्पर्क समितिहरु बञ्जित छन् भन्ने सवालमा जनसम्पर्क समिति डेनमार्क र पार्टी नीति, अनुसन्धान, तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग पनि कुराकानी भएको हो। प्रतिष्ठानले चिठी पठाउन केन्द्रसँग लिष्ट माग्दा बेल्जियम,अष्ट्रेलिया,क्यानाडा र जापानमा बिबाद देखिएका कारण पत्राचार नगरिएको हो। एउटा पक्ष बोलाउदा अर्को रिसाउने, एउटा बोलाउदा अर्कोलाई आधिकारिता दिए जस्तो देखिने र त्यसले झन् बिबाद आउने भएकाले यसो गरिएको हो। ति समितिहरुको हकमा भने व्यक्तिगत रुपमा महासमिति सदस्य,महाधिबेशन प्रतिनिधिको रुपमा बोलाउने निर्णय भएको छ। अन्यको हकमा समितिलाई नै पत्र काटेका छौ। तर यो कार्यक्रम लगत्तै नेपाली काँग्रेसको जनसम्पर्क समिति विभाग गठन गरेर, विभागका संयोजक नै बिबाद भएका सम्बन्धित देशहरुमा पुगेर सम्बन्धित सबैसँग छलफलगरी पार्टी केन्द्रित समितिमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने र त्यहीबाट नै अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी थालिएको छ। जनसम्पर्क समिति डेनमार्कले त कार्यक्रमको संयोजन, ब्यबस्थापन र सहजीकरण मात्र गरेको छ।
तपाईलाई भेला रोक्न वा स्थगनका लागि केन्द्रियस्तरका नेताहरुबाट कुनै दवाव आयो ?
मैले त त्यस्तो दवाव झेल्नु परेन। मलाई कसैले पनि कार्यक्रम रोक्न वा स्थगनका लागि भनेन। तर कता कता मिडियामा आउदा कोहि नेता जाने कोहि नजाने भन्दै नेताहरुबिचमा नै अफवाह फैलाउने काम भएको मैले देखे। तर समग्ररुपमा भन्नुपर्दा यो नेपाली काँग्रेसको कार्यक्रम हो,नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुको हितका लागि छलफल र बहस हुन्छ।यहाँ कुनै पनि नेताले पक्ष वा विपक्ष भएर आउने वा नआउने भन्ने हुँदैन।
देउवा इतर नेताहरु भेलामा नआउने भन्ने चर्चा त थियो नि ? कुन-कुन नेताहरु सहभागी बन्दैछन्
उपसभापति विमलेन्द्र निधि र केन्द्रिय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल कोपेनहेगन आईपुग्नु भएको छ। महामन्त्री डा.शशांक कोईराला, प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, केन्द्रिय सदस्य डा. रामशरण महत, अनुशासन समिति संयोजक भिष्मराज आङदाम्वे, केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङ, केन्द्रिय सदस्य गोविन्द भट्टराई, आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य किरण पौडेल, महिला नेतृ प्रतिमा गौतम लगायतको भिसा र टिकट कन्फर्म भएको छ। जुन २० तारिख बिहिबार बिहान ७ बजे कोपेनहेगन एयरपोर्टमा आउदैहुनुहुन्छ। उहाँहरु सबै आउदैहुनुहुन्छ। सिङ्गो काँग्रेस पार्टीका नेताहरु सहभागि बन्दैहुनुहुन्छ।
यतिधेरै नेता,कार्यकर्ताहरु डेनमार्गजस्तो महंगो देशमा त्यसमा पनि तारे होटलमा रहनुहुन्छ,तपाईहरुको खर्चको स्रोत के हो ?
२७ देखि ३० वटा देशका जनसम्पर्क समितिहरुका ९० देखि १२० जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति हुने मेरो अनुमान छ। सहभागी प्रतिनिधिहरुले खाने,बस्ने र टिकटको खर्च आँफैले ब्यहोर्नुपर्ने केन्द्रले परिपत्र गरेको हुँदा हामीलाई ब्यबस्थापनका लागि सहज भएको छ। तर प्रतिनिधिहरुलाई मर्का नपरोस् भनेर हामीले एक सय युरोमा ५ छाक खाना, चिया,कफीको ब्यबस्था गरेका छौ। यसो गर्दा प्रत्येक प्रतिनिधिको ३ देखि ४ सय युरोसम्म खानाबाट वचत हुन्छ। र केन्द्रिय नेताहरुले पनि आ-आफ्नो टिकट र खर्च आँफै ब्यहोर्नुहुन्छ। त्यसैले कार्यक्रम व्यावस्थापनको सहजताका विभिन्न २० वटा उपसमितिहरु बनाएर जिम्मेबारी दिएका छौ।
भेलाको मुख्य उदेश्य के हो ? के -कस्ता छलफलहरु गर्दैहुनुहुन्छ ?
स्क्याडिनेभियन क्षेत्रमा रहेको समाजवादी राष्ट्र डेनमार्क जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सफल प्रयोग कसरी गरेको छ। हामीले सिक्न जरुरी छ। हाम्रो पार्टीलाई अझ व्यावहारिक रुपमै प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रुपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो देश जहाँ आर्थिक, सामाजिक रुपमा विपन्न र पिछाडिएका जनताको जीवनस्तरलाई माथी उठाई देशलाई समृद्धिको दिशामा कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ ? छलफल गर्ने छौ।
कार्यक्रममा समाजवादी राष्ट्रहरुको डेमोक्रेटिक कल्चरबारे आइडिया सेयर गर्ने, नेपालमा भएको परिवर्तनलाई विदेशमा भएका नेपालीले कसरी लिएका छन् ? नेपालको शान्ति, समृद्धिमा उनीहरूले कसरी योगदान गर्न सक्छन् ? वदलिदो विश्व राजनिति एवम् नेपालको वर्तमान अवस्था, ग्लोबल वामिङ् र नेपालमा परेको त्यसको असर आदी बिषयहरु बिभिन्न सेसनहरु बनाएर छलफल गर्नेछौ।
साथै नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु विचको अन्तर सम्वन्ध, नेपालको विकासमा विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले पुर्याउन सक्ने योगदान, विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो मताधिकारको प्रयोगका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी दबाब सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्ने छौ। गैर आबासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई अझ बलियो र सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने बारेपनि बहस गर्ने छौ। र नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकवाट पारित समावेशी विधान जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरुमा पनि केन्द्रिय नेतृत्वहरुसँग जिज्ञासा राख्नेछौ।
तपाई डेनमार्कमा बस्नुहुन्छ,स्क्याडिनेभियन राष्ट्रहरुको समाजवादबाट काँग्रेसले के सिक्न सक्ला ?
विश्वमा १७-१८ शताब्दी तिर दुई किसिमका बैचारिकधारहरुको उदय भयो। एउटा धार जसले उदार लोकतन्न्त्रको पक्षपातिरुपमा आफुलाई उभ्याए। वेलायत, फ्रान्स, अमेरिका जसले पुँजिवादी धारलाई अंगाले। अर्कोतर्फ रुस, पुर्वि युरोप, जर्मन लगायतका देशहरुले कम्न्युष्टविचार अगाले। यि दुबै धारहरुले आफुलाई एक अर्काको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरे। तर विश्व राजनितिमा यी दुबै धारले मानव विकासको क्रमलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । नत साम्यवादी विचारधारा बोकेर हिडेका कम्न्युष्टहरु साम्यवादी चरित्रमै रहन सके। नत उदार लोकतन्त्रका पक्षपातिहरु उदार रुपमै रहन सके। यसर्थ कम्न्युष्ट विचारधाराबाट मात्रै मानव विकास क्रम अगाडी बढदैन भन्ने कुरा शोभियत संघको विघटन, पुर्वि युरोपको कम्न्युष्ट शासनको अन्त्य र पछिल्लो २/३ दशकमा चिनको परिवर्तित उदारवादी अर्थ नितिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। साथै उदार लोकतन्त्रका हिमायती बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनु, अमेरिकी बोर्डरमा कडाई गर्दै लानु, शरणार्थीहरु माथि कडाई गरिनु जस्ता व्यवहारहरुले उदार लोकतन्त्रको चरित्रलाई कदापि पनि समर्थ गरेको जस्तो देखिदैन।विश्वमा हाल मुख्यगरि तीन किसिमका बैचारिक धारहरु पुँजिबाद, समाजवाद र कम्न्युष्ट विचारधाराका माध्मयबाट बैचारिक एवं नितिगत रुपमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा छन्। अमेरीका, बेलायत जस्ता राष्ट्रले पुँजिवादी धारको नेतृत्व गरेका छन् भने चिनले कम्न्युष्टधारको नेतृत्व गरेको छ।
साथै स्क्याडिनेभियन राष्ट्रहरु डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नर्वे र स्विडेनले समाजवादीधारको नेतृत्व गरेका छन। पुँजीवादी विचारधाराले व्यक्तिको निजि सम्पति राख्न पाउने अधिकारलाई पक्षपोषण गर्दछ।व्यक्तिको हक र अधिकारलाई राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने बताउछ। पुँजीवादले व्यक्तिगत सम्पति र स्वतन्त्रतालाई बढी महत्व दिन्छ। साम्यवादी विचारधाराले व्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पति महत्वपुर्ण होईन भन्छ । राज्यले नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रियकरण गर्दै सबैले समानरुपमा बाँच्न पाउनपर्छ। धनि र गरिबबिच बिभेद हुनुहुन्न भन्ने मान्यताको पक्षपोषण गर्दछ।
समाजवादी विचारधाराले समानता र स्वतन्त्रता एउटै रथका दुईपांग्रा हुन्। यसलाई एक अर्काको विकल्पको रुपमा लिन हुँदैन, समानता र स्वतन्त्रतालाई मिलाएर राज्यको सामाजिक चरित्रलाई निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। समाजबादले व्यक्ति, समाज र राज्यले जान सक्ने अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। समाजबादले व्यक्तिको हक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई राज्यले रक्षा गर्दै शिक्षा, स्वास्थ, पुर्वाधार बिकास, सामाजिक सुरक्षा, राज्यको सुरक्षा र महत्वपूर्ण लगानि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु पुर्ण रुपमा राज्यको नियन्त्रणमा हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ।अब यि ३ विचाधारालाई अगाल्ने राष्ट्रहरुको समानता अवस्था, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गरिब र धनि बिचको दुरी, भष्ट्रचारको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्वपुर्ण कुराहरुको अबस्थालाई बिष्लेषण गरेर त्यसको आधारमा कुन विचाधारको माध्यमबाट मानव विकासलाई जिवन्तता दिन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
बैचारिक आधारमा हेर्ने हो भने पुँजिवादी र साम्यवादी राष्ट्रहरुले आफुलाई पुर्ण रुपमा पुँजिवादी र पुर्णरुपमा साम्यवादी विचारधाराको आधारमा अगाडी बढाउन सकेका छैनन्। एकातर्फ आफुलाई पुर्ण रुपमा पुँजिवादी कहलाउने अमेरिकाले त्याँहाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजक सुरक्षा, पुर्वाधार विकास जस्ता कुराहरुलाई राज्य द्वारा नियन्त्रित गरको छ भने सामुहितामा जोड दिने चिनले व्यक्तिगत सम्पति राख्न पाउने अधिकार सहितको उदार अर्थ नितिलाई अगालि सकेको अवस्था छ। साथै यि दुबै राष्ट्रमा गरिब र धनि बिचको खाँडलको दर बढ्दो छ। भने अर्को तर्फ समाजवादी विचारधारालाई अगाल्ने स्क्याण्डनेभियन राष्ट्रहरुले जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यमा समान पहुँच, शिक्षामा जनताको समान पहुँचको राज्यले ग्यारेण्टी गरेको छ।
साथै यि स्क्याण्डनेभियन क्षेत्रका समाजवादी राष्ट्रहरुमा भ्रष्टाचार करिब शुन्य अवस्थामा हुनु, गरिब र धनि बिचमा खासै त्यस्तो अन्तर नहुनु, अन्य देशको तुलनामा यहाँका जनताहरु बिश्वकै खुसी र सुखी मान्छेको रुपमा मानव विकास सुचांकमा सुचिकृत रहनुले पनि समाजवादी विचारधाराले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानतालाई सन्तुलित रुपमा मिलाएर लान सक्छ भन्ने कुरा समाजवादलाई आफ्नो आदर्श मान्ने नेपाली काँग्रेसले गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ। जसका विषयमा यस कार्यक्रमा गहन छलफल हुन्छ।